Ọdịnihu anyị - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Gbasara anyị > Ọdịnihu Anyị
Iji mezuo nzube anyị, anyị ga-eme:
Nyere ndị mmadụ aka n'ofe obodo anyị ka ha wee zụlite ụzọ na -ewulite nkwụsi ike, na -eme ka ọdịmma dị mma ma na -akwado ezi ahụike.
Kwado ndị mmadụ ka ha mee nhọrọ nke ọma ma leba anya n'okwu ha.
Kwadebe ndị mmadụ ịnagide, jikwaa ma melite ahụike uche ha.
Mee ka ohere dịrị maka ndị mmadụ ime mmemme na itinye aka bara uru n'ime obodo ha.
Mee ka nghọta ka mma maka ahụmịhe ndị mmadụ nwere nsogbu ahụike uche na mgbaka.
Gbaa mbọ hụ na olu dị iche iche na -emetụta atụmatụ, mkpebi na nnyefe anyị.
Atụmatụ atụmatụ anyị na-ewepụta ntụzịaka na ihe ndị anyị ga-ebute ụzọ maka afọ atọ na-abịa. Ọ na-enye ntọala maka ime mkpebi yana atụmatụ na atụmatụ ndị ọzọ emepụtara n'ime nzukọ ahụ ga-adakọrịrị na isiokwu ndị akọwapụtara n'ime ya.
Lelee atụmatụ atụmatụ anyị 2021-2024
N'oge na-adịbeghị anya, anyị bipụtara atụmatụ atụmatụ anyị maka Eprel 2021-24. Ndị ọrụ, ndị mmekọ, ndị ọrụ afọ ofufo, ndị ahịa na ndị na-elekọta ụlọ ọrụ gbara izu n'okwu ndị bụ isi na anyị nwere obi ụtọ ịkọrọ gị echiche ha dịka akụkụ nke atụmatụ atụmatụ ọhụrụ anyị.